Ma run baa in dal kale uu u cararay Hoggaamiyihii Gobolka Tigreyga? | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ma run baa in dal kale uu u cararay Hoggaamiyihii Gobolka Tigreyga?
Ma run baa in dal kale uu u cararay Hoggaamiyihii Gobolka Tigreyga?
Ciidamada Federaalka Itoobiya ayaan ku guuleysan inay gacanta ku soo dhigaan Hoggaamiyaha Gobolka Tigreyga, tan iyo markii ay horaantii bishan Dowladda Itoobiya ku dhawaaqday hawlgalka militari ee ka dhanka ah Madaxda Maamulka Tigreyga.
Waxaa soo baxaya warar aan la xaqiijin oo sheegaya in Debretsion Gebremichael uu u cararay Magaalada Juba ee Xarunta Wadanka South Sudan.
Wararka ayaa intaa ku daraya in Hoggaamiyaha Maamulka Tigreyga, Debretsion Gebremichael loo maleynayo in uu magaalo madaxda Juba kula kulmay Madaxweynaha Masar, Abdel Fattah al Sisi oo Sabtidii booqasho ku tagay dalkasi.
Booqashadan oo ah tii ugu horeysay ee ebid uu Madaxweyne al Sisi ku taggo Magaalada Juba ayaa la sheegay inay la xiriirto wadahadalada biyo xireenka Itoobiya ee Webiga Nile.
Dhanka kale waxaa xalay soo baxay warar sheegaya in Xukuumadda Addis Ababa ay dalkeeda ka ceyrisay diblomaasiyiinta reer South Sudan, sida uu ku waramay wargeyska afka dheer ee Sudan Post, kana soo baxa dalkaasi.
“Waxaa nala siiyay 72 saacadood oo aan kaga baxeyno dalka. Go’aankaas waxaa nalagu soo gaarsiiyay warqad ay soo saartay Hay’adda Nabad Sugidda ee Itoobiya, waxayna noo sheegeen in aanan halkan nalaga rabin, illaa amar dambe.” Ayuu yiri diblomaasi uu wargeyskaasi soo xigtay.
Safiirkii Itoobiya ee South Sudan, Fisseha Shawl ayaa Sabtidii isaga tagay Magaalada Juba. Tagitaankiisa waxaa loo maleynaya mid uu ku qaadacayo booqadashada Madaxweyne al Sisi amaba jooggitaanka Debretsion Gebremichael ee magaaladaasi.
Haddii si dhaba loo xaqiijiyo in Gebremichael uu u cararay Magaalada Juba waxay markaasi dhaawici doontaa xiriirkii labadaasi dal.
Previous articleMa’ogtahay in Safiirka Kenya laga eryay dalka, isagoo ku sugan Nairobi
Next articleMahad Salaad: Kenya waxay Farmaajo ka diiday in ay u soo afduubaan Axmed Madoobe